ဗိုင်းရပ်စ် Cleaner Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » virus Cleaner - Antivirus ကိုအခမဲ့ & ဖုန်းနံပါတ် Cleaner
virus Cleaner - Antivirus ကိုအခမဲ့ & ဖုန်းနံပါတ် Cleaner APK ကို
virus Cleaner ဟာ android ဖုန်းစူပါ antivirus ကိုသန့်စင်သည်။ ဒါဟာအတွင်း၌အခမဲ့ antivirus ကိုနှင့်အစွမ်းထက် antivirus ကိုအင်ဂျင်ပါပဲ။ ဒါ့အပြင်ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး, ဖုန်းသန့်စင်, လုံခြုံရေးမာစတာ, WIFI လုံခြုံရေး, မြန်နှုန်း booster ကတော့အကြောင်းကြားစာသန့်စင်, ဘက်ထရီချွေတာ, CPU ကိုအေး, RAM ကိုသန့်စင်, cache ကိုသန့်စင်, android ဖုန်းစင်ကြယ်သောသခင်, ဆန့်ကျင် malware များနှင့် antivirus ကိုသန့်စင်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခု Download! ဖုန်းကိုပိုလုံခြုံ, သန့်စင်ခြင်း, ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါ!
-အခမဲ့ antivirus: အတွင်း၌အင်အားကြီး antivirus ကိုအင်ဂျင် app ကိုစကင်နှင့်နက်ရှိုင်းသောစကင်။
-ဖုန်းနံပါတ် Cleaner: အစာရှောင်ဖုန်းကိုစင်ကြယ်စေဖို့သန့်စင်။
-မြန်နှုန်း Booster: ကပိုမြန်စေမိုဘိုင်းဖုန်းတက်မြန်စေ။
-ဘက်ထရီ Saver: ပါဝါကိုချွေထိရောက်စွာဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ပါ။
-CPU ကို Cooler: CPU ကိုအပူချိန်ကိုချထားရန်အပူလွန်ကဲ app များကိုသတ်။
-WIFI လုံခြုံရေး: privacy ကိုယိုစိမ့်ရာမှ WIFI ကာကွယ်ပေးသည်။
-သတိပေးချက် Cleaner: စကားအနှင့်သန့်ရှင်းသောဆူညံအကြောင်းကြားစာများ။
-အင်တာနက်ကို Booster: အင်တာနက်ကွန်ယက်ကိုအာနိသင်တိုးမြှင့်နှင့်အတူ brandwidth ၎င်းပြင် apps များကိုသတ်။
-ဂိမ်း Booster: ဂိမ်းကစားခြင်းအဘို့ဖုန်းကို Boost ။
★ virus Cleaner - အခမဲ့ antivirus, လုံခွုံရေး
virus Cleaner, malware ကိုထွက်ရှာတွေ့မှ apps များစိစစ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, spyware, Trojan တွေ။ ထိုအသင်သည်သင်၏မြေတပြင်လုံးကိုဖုန်းဖိုင်များကိုနက်ရှိုင်းသောစကင်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အတွင်းအပြင်အစွမ်းထက် antivirus ကိုအင်ဂျင်နှင့်အတူ, ကသင့်ရဲ့ဖုန်းကယ့်ကိုစူပါလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်ကိုလည်းထောက်ပံ့ Real-time ကာကွယ်မှု အသစ်သော application များ install လုပ်သည့်အခါသင်၏ဖုန်းအဘို့, ကစူပါလုံခြုံရေးမာစတာနှင့်စူပါဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးဖြစ်ပါတယ်။
★ ဖုန်းနံပါတ် Cleaner - junk Cleaner
အစွမ်းထက် junk သန့်စင်ဒါအပေါ်မှာရှိတဲ့ Junk ဖိုင်တွေ, app ကို cache ကို, ကျန်နေတဲ့ဖိုင်များ, အသုံးမကျ APK ကိုဖိုင်တွေနဲ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီပေးသည်။ ဖုန်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပိုပြီးသိုလှောင်ရန်နေရာအားဖြင့်, ဖုန်း junk သန့်စင်က Android မိုဘိုင်းဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ။ ဒါဟာအစစနစ်က cache ကိုသန့်စင်နှင့်သန့်ရှင်းမာစတာဖြစ်ပါတယ်။
★ ဖုန်းနံပါတ် Booster - ဖုန်း Up ကိုအရှိန်မြှင်
ဖုန်းနံပါတ် Booster ဖြစ်ပါသည် RAM ကို Cleaner, wich အများအပြားမှတ်ဉာဏ်သုံးပြီး apps များဦးသေဆုံး, နှင့်ပိုပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဖုန်းကိုလုပ်ရမည်။ တကယ်ပဲစူပါမြန်နှုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်။
★ CPU ကို Cooler
CPU ကို Cooler တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ Android ဖုန်း CPU ကိုအပူချိန်ကိုချအအေးပေးနိုင်သည်။
သင့်ဖုန်းအတွက်အလွန်များ junk အကြောင်းကြားစာများတွေ့ပါ, သင်၏ဖုန်းကိုမကျေမနပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ အကယ်. ရုံအသိပေးချက်များကို oganize ကြှနျတျောတို့၏အစွမ်းထက်အကြောင်းကြားစာသန့်စင်အသုံးပြုပါ။ ဒါဟာအသံပိတ်မှပေးသောအကြောင်းကြားစာရွေးကောက်သဖြင့်, ရာမနိုငျသညျ။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်အတု WIFI သိရှိနိုင်ဖို့ WIFI လုံခြုံရေးသုံးပါနှင့်သင်တို့အဘို့အလိုအလြောကျ WIFI ကို encrypt မလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့် privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲလုံလုံခြုံခြုံမဆိုအများပြည်သူ WIFI ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာ privacy ကိုယိုစိမ့်မှသင်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
1 ။ လူသိများကိစ္စရပ်များကိုဖြေရှင်းပါ။
2 ။ ပင်မစာမျက်နှာ UI ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
3 ။ တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်စေပါ။
virus Cleaner - Antivirus ကိုအခမဲ့ & ဖုန်းနံပါတ် Cleaner
8.37 ကို MB